अनुभूति : यो मन कहाँ दुख्छ ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अनुभूति : यो मन कहाँ दुख्छ ?
एनाटोमीमा मैले कहिल्यै कतै ‘मन’ पढिनँ । शरीरका अन्य अंगहरूझै‘मन’ कुनै अंग विशेष र‘मन’ रहने ठाउँ र स्थानविशेषको बारेमा कतै पढेको वा उल्लेख भएको पनि पाइनँ । अनि यो ‘मन’ भन्ने चीजको उपस्थिति हाम्रो शरीरभित्र कहाँ र कसरी रह्यो ?
कार्तिक २३, २०७६ अनिल श्रेष्ठ
आज म धेरैचोटि आफैंसँग घोत्लिएको छु । मेरो यो घोत्ल्याइँले भने बिहानैदेखि घरमा श्रीमतीको छटपटीलाई बढाइरहेछ । मेरो यो घोत्लिनु र एकोहोरिनुले उनी निकैअघिदेखि अलमलिएर मलाई नियालिरहेकी छन् ।
मेरो व्यवहारमा आएको यो एक्कासि परिवर्तनले उनलाई पनि एउटा सन्तापले लखेटिरहेको हुँदो हो सायद । उनी घरीघरी मेरो नजिक आउँछिन् । मेरो कपाल मुसार्छिन् र मलाई सोध्छिन्, ‘सन्चो भएन कि के हो ? हँ ??’
म चुपचाप उनलाई हेरेर टोलाइरहन्छु । उनी दुविधापूर्वक मलाई हेरेरै टोलाइरहन्छिन् । र, फेरि सोध्छिन्, ‘सन्चो लाग्या छैन ?’
तर मेरो छेउमै उभिएको उनको त्यो उपस्थितिसँग भने म बेसरोकार छु । उनका ती प्रश्नहरूले मलाई छुँदैन । मेरो यो मौन व्यवहारले उनी अचम्म मानेर फेरि पनि मलाई नियालिरहन्छिन् । म उनको आँखा र निधारभरि उठिरहेको उनको त्यो असामन्जस्य, चिन्ता र छटपटीहरूलाई हेरिरहन्छु । र, निस्फिक्री छु । म आफ्नै मनसँग एकान्तमा छु । मनको एउटा लयमा छु । मनसँग एकालापमा छु । र, बेफिक्री छु ।
‘मन एकातिर बाँधिएर
एकातिर पोखिने वस्तु हो
मन एकातिर खुम्चिएर
एकातिर फैलिने वस्तु हो
मन एकातिर कठ्याङ्ग्रिएर
एकातिर बल्ने वस्तु हो
मन यी अन्तरद्वन्द्वलाई
सम्हाल्ने वस्तु हो
एउटा प्रवेशद्वार हुन्छ जिज्ञासाको
ढकढकाउनु राम्रो ।’
(संगतिहरूको आँखीझ्यालबाट, पारिजात)
जिन्दगी, साना–साना कुराहरूले टाल्दै हिँड्नुपर्ने । सिलायो, फुस्किन्छ । फेरि सिलायो, फेरि फुस्किन्छ । मन कहिले सियो बनिदिन्छ । मन कहिले धागो बनिदिन्छ । टाल्दाटाल्दै जिन्दगी मक्किएरै जानुपर्ने । च्यातिएरै सकिनुपर्ने ।किन यो मनसँग आज मलाई यतिधेरै घोत्लिरहन मन लागिरहेछ !
‘मन’ धेरैले, धेरैचोटि, धेरै ठाउँमा र धेरै प्रसंगमा प्रयोग र उच्चारण गरिरहने शब्द हो यो सायद । चाहे त्यो लेख्य साहित्य गीत, गजल, कविता होस् या दृश्यश्रव्य चलचित्रका संवाद, चाहे त्यो संवेगात्मक होस् या परिहासको अवस्था, दुःख होस् या सुख या एकान्तका क्षणहरू, मनको सम्बन्ध मनग्गे पाइन्छ । सामान्य बोलचाल र व्यवहारमा सधैं अस्तित्व जमाएर बस्ने यो भावपरक शब्दको प्रभाव र प्रयोग कहाँ र कसरी दोहोरिरहँदो रै’छ, एकचोटि हेरौं न ।
‘त्यसो नभन न, मन दुख्छ ।’
‘मैले उसलाई मनमनै मन पराएँ ।’
‘मेरो मन खुसीले नाचिरह्यो ।’
‘मन फुकाएँ ।’
‘मन रोइरह्यो ।’
‘मनको चोट ।’ इत्यादि, इत्यादि ।
अधिकांश फिल्मका गीतका दृश्यहरूमा प्रेमी र प्रेमिकाबीचको एउटा प्रेमिल क्षणलाई अभिव्यक्ति दिनका लागि पनि यो मन शब्दको अधिक प्रयोग भएकै छ क्यार । आसक्ति, प्रेम र अनुराग भावलाई मनको अवस्थासँग प्रकट गरेर एउटा आह्लाद सिर्जना गरिएका श्रव्यदृश्य साहित्य पनि प्रशस्तै निर्माण गरिएका छन् । मनको यो विराट स्वरुप र व्यापकतालाई खोज्न पनि म अहिले यति विछट्टले एकोहोरिरहेको छु ।
कहिलेकाहीँ एकलकाँटे भइदिन्छ मन । एउटा यायावर जो क्षितिज खोज्दै हिँड्छ र ऊ क्षितिज भेट्न निरन्तर एक्लै यात्रामा हिँडिरहेको हुन्छ, ऊसँग सधैं एउटै प्रश्न रहन्छ त्यो शून्य आकाश परको जीवन कस्तो होला ! कहिलेकाहीँ म त्यो यायावरले झैं सोच्छु, साँच्चै मान्छेभित्र यो विराट मन अट्ने ठाउँ कस्तो होला ! एउटा व्यक्ति, व्यक्तिसँग जोडिने परिवार अनि समाज अनि देश अनि सिङ्गो मानव जाति र समुदाय, यी सबैसँग जोडिएर आउने भावना, विचार र स्वार्थ । ती आउँछन् कहाँबाट ?
म एकै छिन मनको अस्तित्वलाई खोज्छु । यो कहाँ, कुन आकार र स्वरूपमा, कुन आकृतिमा र कुन अस्तित्वमा विद्यमान छ ? घोत्लिन्छु । मैले स्वास्थ्य शिक्षा पढ्दा शरीरविज्ञान (एनाटोमी) पढेको छु । एनाटोमी भनेको शरीरका अंगहरू सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विषय हो । मैले त्यहाँ हाडहरूको विषय पढेको छु । मान्छेको टाउकाको हाडभित्र रहने मस्तिष्क (गिदी), नसा र रक्तनलीहरू पढेको छु । छातीको हाड (करङ) भित्र रहेको मुटु, कलेजो, फोक्सो, आमाशय र पित्तथैली पढेको छु । र, पेल्भिस क्याभिटीभित्र रहेको मृगौला, मूत्रनली र मूत्रथैलीहरू पढेको छु । शरीरभित्र कहिलेकाहीँ यी अंगहरूमा हुने संक्रमित रोगहरूले यी अंगहरू दुख्छ । तर एनाटोमीमा मैले कहिल्यै कतै ‘मन’ पढिनँ । शरीरका अन्य अंगहरूझै ‘मन’ कुनै अंग विशेष र ‘मन’ रहने ठाउँ र स्थानविशेषको बारेमा कतै पढेको वा उल्लेख भएको पनि पाइनँ । अनि यो ‘मन’ भन्ने चीजको उपस्थिति हाम्रो शरीरभित्र कहाँ र कसरी रह्यो ? यो कसरी संक्रमित हुन्छ ? कसरी दुख्छ ? मन, न शरीरमा कतै यसको उपस्थिति छ, न आँखाले कतै यसलाई देख्न सकिन्छ, न यसलाई कुनै आकार र स्वरूपमा छाम्न सकिन्छ । फेरि पनि मान्छेलाई यसले दुखाउँछ, रुवाउँछ, हँसाउँछ, खुसी बनाउँछ ।
मान्छेमा रिस कहाँबाट आउँछ ? कहाँबाट आउँछ सुख ? दुःख कहाँबाट आउँछ ? र, कहाँबाट आउँछ अभिमान ? सबैले दिने एउटै जवाफ हुनेछ सायद, ‘मनबाट’ । यो रिस, सुख, दुःख, अभिमान, सन्ताप, प्रेम, घृणा, आक्रोश, खुसी, आनन्द सबैको स्रोत मन हो भने यो मनचाहिँ छ कहाँनिर ? एउटै हावाको स्पर्शले पनि किन कसैलाई आनन्द दिन्छ ? र, कसैलाई बिझाउँछ ? एउटै फूलको रङ किन कसैलाई मन पर्छ र कसैलाई मन पर्दैन ? कुनै मान्छे, कुनै वस्तु या चीजसँगको आकर्षण किन हुन्छ ? मन मान्छेको शरीरभन्दा बाहिरको अस्तित्व हो भने मान्छेलाई यसले नदुख्नुपर्थ्यो । मान्छेलाई यसले नछुनुपर्थ्यो ।
एक दिन मेरो एकजना केटी साथीले एउटा सरप्राइज दिने कुराको गाँठो फुकाउँदै मलाई जिस्किएर भनिन्, ‘तिम्रो मन छामेकी ।’
मैले तुरुन्तै सोधें उसलाई, ‘कसरी फेला पार्‍यौ र मेरो मन ?’
उनी एकै छिन अलमल्ल परिन् र लजालु भावले मलाई हेरिरहिन् ।
अचम्मको छ यो मन । कतिले कतिलाई रुवाएको छ । कतिले कतिलाई दुखाएको छ । कतिले कतिलाई निस्फिक्रीसँग हँसाएको पनि छ । भन्छन् नि, ‘मन रोएको देखिँदैन । मन बिमारी भएको औषधि लाग्दैन ।’ बिचरा ! चिकित्सकहरू, शरीरको घाउ पो देख्छन् । उपचार गर्छन् र निको बनाउँछन् । मनको घाउ देख्दैनन् । जाँचपड्ताल गर्छन् । सबै अंग हेर्छन् । सबै उस्तै दुरुस्तै छन् । कुनै संक्रमण देखिँदैन । अनि भिटामिनको झोल लेखिदिन्छन् र भन्छन्, ‘लाऊ, यो खाऊ र एक सातापछि आऊ ।’
बिरामीको दुब्लाउँदै र पातलिँदै गएको जीउलाई हेरेर डाक्टरले छातीको भिडियो एक्सरे गरिदिन्छन् । तर कतै मस्तिष्कको, मुटु र कलेजोको छेउको कुनै भागमा मनको भाग देखिँदैन । अनि कुन अंगको उपचार गरिदेओस् चिकित्सकले !
म घोत्लिएको छु निकै दिनदेखि आफ्नो मनसँग । दुःख, पीडा, खुसी, हाँसो, उत्साह, निराशा, छटपटी, वेदना मान्छेको मनसँग गाँसिएर कसरी आउँछ ? मान्छेभित्र यो कसरी उब्जन्छ ? विचारहरूको तरंगले शरीरमा ल्याउने प्रभाव हो सायद मन । मेरा घोत्ल्याइँहरू बाँकी छन् अझै । म भने अरुणा लामाको सुमधुर आवाजमा राजेन्द्र थापाको गीतलाई गुन्गुनाइरहेको छु यतिखेर :
‘पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टालें
त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टालें
यसपालि त मनै फाट्यो
केले सिउने, केले टाल्ने हो !’ प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ १४:३४
मेरो हुती अब मेरो टीठलाग्दो नजर हो !
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ १४:३२
आमा किन रुनुभयो ?
प्रयागराज : एक बोटानिस्ट
भानुको चुँदी रम्घामा मौनताको आवाज
मैलो कमिज : एक भयानक प्रश्‍न
हामी बाँच्न चाहेको सहर
न्युरोडको नबदलिएको चरित्र